बिहार र युपीमा मधेस बहस
30 Jan 2016 | 07:44am
भारत (लदनीया)- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ११ बुँदे माग पूरा गराउन ६ महिनादेखि जारी मधेस र नाका अवरोधबारे भारतको युपी र बिहारमा बहस सुरु भएको छ। स्थानीय पूर्व विधायक र सत्ताधारी दलका नेताको अगुवाइमा मधेस मुद्दाबारे बहस चलाइएको हो। युपीको सीमाबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलनलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम अहिले नेपाल–भारत सीमावर्ती बिहारका सहरमा सञ्चालन भइरहेको छ।
यो कार्यक्रममा बिहारका सहरका नागरिक, यहाँका सत्ताधारी दलका नेता, मधेसीबाट मोर्चाका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र मधेस मुद्दा बोकेर आन्दोलनमा लागेका अन्य दलका नेताको सहभागिता रहने गरेको छ।
मधेस आन्दोलनको मजबुती प्रदान करने हेतु' नारा दिएर भारत–नेपाल सद्भाव समिति र भारत–नेपालमैत्री संवाद यात्रा नै गठन भएको छ, सिमापारि। यो समितिको अगुवाइ राष्ट्रिय जनता दलका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रघुवंशप्रसाद सिंह, समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता देवेन्द्र यादव र पप्पु यादवले गरिरहेका छन्।
यी समितिको उदेश्य भनेको मधेस आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्यालएर मधेसको माग सम्बोधन गराउन बल प्रदान गर्नु रहेको भारतीय नेताले भाषणमा भन्ने गरेका छन्।
माघ ४ गते सीमावर्ती भारतीय सहर जयनगरको किसान भवनमा आयोजित कार्यक्रममा देवेन्द्र यादवले भनेका थिए, 'मधेसमा जारी आन्दोलन सम्बोधन गर्नुको साटो नेपाली राज्यसत्ताले मधेसीमाथि गोली बर्साएर दमन गर्नु कुनै सर्तमा जायज होइन्।' उनले मधेसमा मधेसीको रगत बग्दा आफूहरूको मन दुखेको बताएका थिए।
...नेपालमा मधेसीलाई यहाँको राज्यसत्ताले गैरनेपालीसरह व्यवहार देखाएको छ, यो गलत हो,' यादवको भनाइ थियो। नेपालमा मधेसीको अधिकार सुरक्षित गराउन आफूहरूले भारत सरकारलाई पनि पहलनिम्ति आग्रह गरेको उनले बताएका थिए।
३ दिनअगाडि भारतीय सहर लौकाहामा भएको सभामा रघुवंश सिंहले भनेका थिए, 'नेपालमा मधेसीले अधिकारनिम्ति गरिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यबाट बर्बर दमन भएको छ, ठीक होइन।' अधिकार माग्दा जबाफमा गोली खानुपर्ने दयनीय अवस्थाबाट मधेसी गुजि्ररहेकोप्रति आफूहरूको सहानुभूति रहेको उनले बताए।
भारतीय सीमावर्ती सहरहरूमा भइरहेको संवाद यात्रामा सहभागी भइरहेका नेकपा माओवादी (मातृका) का नेता जगत यादव भन्छन्, 'भारतीय बिहार र युपीका सत्ताधारी दलका नेताको अभियान मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गराउन दबाबनिम्ति हो।' सीमावर्ती भारतीय बिहार र युपीका नागरिकलाई मधेसमा भइरहेको आन्दोलन केका लागि? यो आन्दोलनमा नेपाली राज्य सत्ताको रबैया कस्तो छ? यसका लागि हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ? भन्नेबारे जागरण फैलाएर दिल्लीलाई दबाब दिने अभियान हो यो।
यो सभामा हजारौं भारतीय नागरिकको सहभागीता रहने गरेको छ। मधेसबाट मधेसकेन्द्रित दलका २/४ जना नेता कार्यकर्ताको मात्र यो कार्यक्रममा सहभागिता रहने गरेको छ। मधेसका नेताले आन्दोलनको माग र राज्यको दमनकारी रबैयाबारे सभामा बोल्छन्।
तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महादेव साह ३ सभामा भाग लिएको बताउँछन्। उनले जयनगर, लौकाहा र लदनीयाको सभामा भाग लिए। साहका अनुसार यो अभियानका अगुवा भारतीय राष्ट्रिया जनता दलका नेता मंगनीलाल मण्डल, रघुवंश प्रसाद सिंह, देवेन्द्र यादव र पप्पु यादव छन्। यी भारतीय नेताको सीमावर्ती ५४ ठाउँमा जागरणसभा गर्ने कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि मधेसकेन्द्रित दलका प्रमुख नेतालाई सहभागी गराएर बिहारको राजधानी पटनामा कार्यक्रम गर्ने योजना छ।
पटनामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि राजधानी दिल्लीमा गएर भारत सरकारसमक्ष मधेसको माग सम्बोधन गराउन नेपाल सरकारलाई पहल गर्न दबाब सिर्जना गर्ने योजना छ। ५४ स्थानको कार्यक्रममा भारतीय नागरिकको मधेस आन्दोलनप्रति उभारले भारत सरकारलाई दबाब दिन वजन बढ्ने योजनाअनुरूप यो जागरणसभा आयोजना भएको बताइएको छ।
जागरण अभियान गरिरहेका भारतीय नेताहरू मधेसकेन्द्रित दल र मधेसको पहिचान आन्दोलनमा लागेका दललाई गोलबद्ध हुनसमेत अग्रह गरेको तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका नेता साहले बताए। आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दल एक ढिक्का भएर गठबन्धन नबनाए शक्ति विभाजनले राज्यलाई धक्का दिन शक्ति कम पर्ने भारतीय नेताहरूको बुझाइ छ।